उपप्रधानमन्त्री यादवले गरे ठूलो षडयन्त्रको पर्दाफास, को हुन् नाइके ? -
उपप्रधानमन्त्री यादवले गरे ठूलो षडयन्त्रको पर्दाफास, को हुन् नाइके ?
१८ आश्विन २०७५, बिहीबार ११:५६ 1974 पटक हेरिएको
काठमाडौं– संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले ठूलो षडयन्त्रको पर्दाफास गरेका छन्। यादवले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्न देशी, विदेशी षडयन्त्र भइरहेकाले सबैलाई सजग रहन आग्रह गरेका हुन्।
संविधान संशोधनविना मधेशी जनतासँग भइरहेको विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै उपप्रम यादवले फोरमकै अगुवाईमा संशोधन भएर छाड्ने दृढता व्यक्त गरे।
मन्त्रप् यादवले विदेशबाट दिनहुँ आउने शवले सबै नेपालीलाई पीडा दिएको उल्लेख गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले गरिबी तथा बेरोजगारीका नाममा अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सहयोगको याचना गर्नुपर्ने अवस्था रहनु चिन्ताको विषय भएको बताए। यादवले स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरेर देशलाई समृद्धितर्फ लैजान सबैको ध्यान जानुपर्नेमा पनि जोड दिए।
समाजवादी लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल प्रदेश नं २ को प्रथम भेलामा बुधबार उपप्रधानमन्त्री यादवले मगन्ते मानसिकताले परनिर्भरताको अन्त्य कहिल्यै हुन सक्दैन बताए। उनले गरिबी, बेरोजगारी र अभावग्रस्त जनतालाई समानता, सम्पन्नता र अधिकार प्राप्त गराउनु अहिले पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
यादवले सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, उद्योग, कलकारखाना स्थापना, कृषिको आधुनिकीकरण गर्न अपरिहार्य भएको औँल्याए।